अन्ततः यसपालि को दशैमा नयाँ नोट बाड्ने-नबाड्ने बारे सरकारले गर्यो यस्तो निर्णय ! – Sudursamaj
मुख्य पृष्ठअर्थअन्ततः यसपालि को दशैमा नयाँ नोट बाड्ने-नबाड्ने बारे सरकारले गर्यो यस्तो निर्णय !
अन्ततः यसपालि को दशैमा नयाँ नोट बाड्ने-नबाड्ने बारे सरकारले गर्यो यस्तो निर्णय !
Madan | Monday September 14, 2020	Comments
२९ भदौं, काठमाडौं । हरेक वर्ष दशैंका लागि नयाँ नोट वितरण गर्दै आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले यसपालीको दशैंमा के गर्ला ? धेरैलाई यतिबेला चासोको विषय बनेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का कारण नयाँ नोट वितरण हुँदैन कि भन्ने सहजै आकलन गर्न सकिन्छ । दशैंको मुखमा नै लकडाउन भए राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट वितरण नगर्न सक्छ । तर दशैंमा नयाँ नोट नै दक्षिणा दिनु पर्छ भन्ने प्रचलनका कारण कतै यसपाली नयाँ नोट नपाइने हो कि भन्ने सर्वसाधारणलाई लागेको छ । *** पुरा विवारणको लागि तल क्लिक गर्नुहोला ***